‘नरैनापुरबासीलाई सुरक्षित बनाउनु हाम्रो कर्तव्य होे’ – Mission
‘नरैनापुरबासीलाई सुरक्षित बनाउनु हाम्रो कर्तव्य होे’
नेपालमा पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको बेला बाँके जिल्ला निकै प्रभावित भयो । त्यतिबेला यहाँको नरैनापुर गाउँपालिका पनि कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित बनेको थियो । नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमितको मृत्यु नरैनापुर मै भएको हो । नरैनापुरका २४ वर्षीय युवक नेपाल मै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने दोस्रो कोरोना संक्रमित हुन् । त्यो भन्दा अघि एक सुत्केरी महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला नरैनापुर कोरोनाको हटस्पट नै बन्यो । जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकाय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो । अहिलेको दोस्रो तथा तेस्रो चरणको कोरोना महामारीको बेलामा समेत नरैनापुर कोरोनाबाट प्रभावित भएको छ । अहिलेसम्म नरैनापुरमा तीन जनाको कोरोनाकाक कारण ज्यान गइसकेको छ । साढे तीन सय जनाको कोरोना संक्रमित छन् । उनीहरुको अहिले आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि एम्बुलेन्स लगायतको उपचार गरिरहेको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परेको प्रयास, नरैनापुरमा कोरोनाको अवस्थाका विषयमा गाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नागेन्द्र शाहसँग मिसन टुडेका दैनिकका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. नरैनापुर गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के के काम गरिरहेको छ ?
नरैनापुर गाउँपालिका पहिलो चरणमा कोरोनाबाट निकै प्रभावित बन्यो । दोस्रने चरणको कोरोनाको महामारी पनि हामी प्रभावित नै छौँ । तर पहिलो चरण भन्दा निकै कम प्रभावित भइरहेको अवस्था हो । पहिलो चरणको कोरोनाबाट हामीले धेरै पाठ सिक्ने मौका समेत पाएका थियौ । त्यसैले जिल्लामा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण सुरु हुन बित्तिकै हामीले कडाई गरेका थियौ ।गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर समय मै निर्माण व्यवस्थापन गर्ने काम ग¥यो । पहिला पाँच बेडको कोभिड अस्पताल थियो । त्यसमा २५ बेड थपेर आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको छ । त्यसमा १५ बेड अक्सिजन सहित रहेको छ । स्थानीय सरकारसँग भएको जनशक्ति कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको अवस्था छ । एक जना डाक्टर, दुई जना नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ । पछि पनि अर्को एक जना डाक्टर र थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । उहाँहरु कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कै लागि खटिरहनु भएको छ । गाउँपालिकाले अत्याधुनिक सुविधा प्रदान गरिएको छ ।
२. पहिला नरैनापुर धेरै प्रभावित भएको थियो, त्यतिबेला र यतिबेलाको अवस्था के छ ?
त्यतिबेला हामी कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हो । त्यतिबेला भारत लगायतका क्षेत्रबाट मानिसहरु आउनु भएको थियो । हाम्रो गाउँपालिका भारतसँग सीमा पनि जोडिएको छ । त्यतिबेला धेरै प्रभावित हुनुको कारण, अनुभव र स्रोत र साधनको कमी हो । त्यसैले निकै सकस पनि भएको थियो । कोरोनाका जाँचकै समस्या थियो शुरुमा ।अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । पोजेटिभ भएपछि बाहिर पठाउन पनि समस्या । त्यतिबेला जनताले पनि निकै भयका साथ हेरेका थिए , कोरोनालाई । पहिलोचोटीको सिकाई पनि हामीले समय मै कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न सफल भयौँ । त्यहाँ डाक्टरको टिम थियो । अन्य व्यवस्थाको लागि पनि स्वास्थ्य शाखाले व्यवस्थापन गरेको हो । दोस्रो चरणको कोरोना शुरु हुनु अघि नै हाम्रो गाउँपालिकामा आइसोलेसन सेन्टर तयारी अवस्थामा थियो । दुई वटा आइसोलेसन तयारी अवस्थामा थिए । विभिन्न वडामा कोरोना संग सम्बन्धित पक्षको जानकारी लिनका लागि फोकल पर्सन समेत हुनुहुन्थ्यो । पछि हामीले गाउँपालिकामा सरकारको निर्देशन अनुसार कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नभएकाहरुलाई होम आइसोलेसन, अन्यलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नको लागि व्यवस्थापन ग¥यौ । अहिले फोकल पर्सनहरुले बिरामीहरुको हेरचाह गर्ने र सल्लाह सुझाव दिने काम सम्बन्धित वडा तथा घरबाट गर्नुहुन्छ । आइसोलेसनमा भर्ना भएका केसलाई भने डाक्टर सहितको टिमले हेरचाह गर्दछ ।
३.अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार नरैनापुरमा, संक्रमित, डिस्चार्ज, सक्रिय संक्रमित र मृतको संख्या कति छ ?
पछिल्लो अपडेट अनुसार गाउँपालिकामा ३ सय १० जना रहेका छन् । उनीहरुको एन्टिजेन प्रविधिबाट कोरोना जाँच गरिएको हो । त्यतिमा ८३ जना केस पोजेटिभ देखिएको थियो ।त्यसमा केही बाहिरको समेत केस रहेको छ ।हाम्रो गाउँपालिकासँग जोडिएका राप्तीसोनारी र नेपालगन्जका समेत थिए । पछि धेरै डिस्चार्ज भएर गए । अहिले चाँही आइसोलेसनमा १९ जना रहेका छन् । उनीहरुको विशेष सुविधा सहित उपचार भइरहेको छ । कुल २७ जना होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाख गरिरहेका छन् । मृतकको संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले सम्म हाम्रो गाउँपालिकाका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको समयमा एक जना भेरी अस्पताल र एक जना कोहलपुर मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भयो । हाम्रोमा पहिलो केस भने पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको बेला ज्यान गुमाउनु भएको थियो । उहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नेपाल कै दोस्रो केस हुनुहुन्छ । भारतमा मजदुरी गर्ने उहाँ हिडेरै आउनु भएको थियो । उहाँको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको थियो । अहिले पछिल्लो समय भने कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छैन ।
४. होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुको कसरी उपचार र हेरचाह हुने गरेको छ ?
मैले अघि नै भने हाम्रोमा होम आइसोलेसनमा २७ जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ । होम आइसोलेसनमा राखिने संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण हुदैन । उहाँहरुलाई होम आइसोलेसनमा राखिने गरिएको छ । अर्थात उहाँहरु खतरामुक्त हुनुहुन्छ । लक्षण भएकाहरुलाई त हामी सिधै आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गर्दछौँ । हामीले अक्सिजनको सुविधा सहितको आइसोलेसन सेन्टर नै उहाँहरुको लागि बनाएको हो । जो घर मै बसेर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुको आर्थिक तथा अन्य अवस्था बलियो छैन । तर होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई हेरचाह नै नगर्ने भन्ने होइन ।उहाँहरुको दैनिक स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना उहाँहरु औषधि समेत सेवन गर्नुहुन्न । यदि कोहि होम आइसोलेसनमा रहेकाहरुलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने, आइसोलेसनमा ल्याएर राखिन्छ । गम्भीर अवस्था भयो भने गाउँपालिकाले अन्य जिल्लाका कोभिड अस्पतालमा उपचारको लागि रिफर गर्दछ । त्यसको लागि गाउँपालिकाले एम्बुलेन्सको समेत सुविधा प्रदान गरेको छ ।
५.अनि कोरोना टेष्ट नभएका र संक्रमितहरुको लागि उद्धार र व्यवस्थापनको लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्नु भएको छ ?
हामीले क्न्ट्रयाक्ट टेसिङको व्यवस्था गरेका छौ । एक जना कोरोना संक्रमित देखिना वित्तिकै उसको सम्पर्कमा रहेकाहरुको खोजी हुन्छ । सोही अनुसार गाउँपालिकाले छिटो भन्दा छिटो त्यस्ता कुराहरु पत्ता लगाएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ । जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै समुदाय स्तरमा कसैलाई केही समस्या भयो भने वडा स्तरको फोकल पर्सन तथा जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ । सोही अनुसार गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्दछौँ । होम आइसोलेसनमा बसेको कुनै पनि केसलाई अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो साह्रो परेमा एम्बुलेन्स पठाएर उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिन्छ । यसको लागि वडादेखि गाउँपालिका स्तरसम्म सूचना प्रवाहको सञ्जाल बनाइएको छ ।
६. अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ, गाउँपालिकामा निषेधाज्ञाको कत्तिको पालना गर्छन् स्थानीयले ?
पहिलो चरणको कोरोनाको बेला रेडजोन नै बनेको थियो नरैनापुर । त्यतिबेला अत्यावश्यक नपरी बाहिर निस्कन समेत दिएका थिएनौँ । अहिले पनि एक महिनायता कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्था छ । नरैनापुर गाउँपालिकामा हामीले निषेधाज्ञालाई कडाईका साथ लागू गरेका छौँ । पहिला मान्छे कोरोनादेखि डराउन्थेन । अहिले भने कोरोनाले लापरबाही गरेमा ज्यान लिन्छ,भन्ने परेको छ । उहाँहरुले पनि पालना गरिहनु भएको छ । हामीले जनचेतना फैलाउने काम गरेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिकामा भारततर्फका नाकाहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । राप्तीसोनारीको सीमानामा पनि सुरक्षाकर्मीहरुलाई परिचालन गरेर कडा बनाइएको छ । नरैनापुरमा निषेधाज्ञा प्रभावकारी छ ।
७. नरैनापुर कोरोना संक्रमणको रेडजोनमा हो र अहिले ?
होइन, छैन सर अहिले । दोस्रो चरणको कोरोना कहरको समयमा यहाँ केही संख्यामा कोरोना पुष्टि भएपनि रेडजोनमा छैन । यहाँ सामान्य रुपमा कोरोनाको करह चलिरहेको अवस्था हो । हामी धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन, मात्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन । दोस्रो चरणमा एक जना जनप्रतिनिधिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि कोरोना टेष्ट नै शुर गएको हो । पछि केस भेटिन थाले । पछिल्लो समय चाँही केस कम नै छ । पछिल्लो समयमा जाँच गर्दा निधै थोरै मात्रामा कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ । पीसीआर पनि हुन्छ, एन्टिजेन हुन्छ । ४ गते २० जनामा गरिएको एन्टिजेनमा १ जनामा कोरोना पुष्टि भयो । तर अहिले पनि वडाहरुमा शंका लागेको व्यक्तिलाई जाँच गरिरहेको अवस्था छ । हाम्रो गाउँपालिकामा मानिसहरुमा कोरोनाबाट बच्नु पर्छ भन्ने धारणा छ । उहाँहरु आफै कोरोना टेष्ट गर्नको आएको संख्या बिरलै छ । तर हामीले पीसीआर गर्न आह्वान चाँही गरेका छौ । धेरै समस्या भयो भने हामीलाई भन्नुुहुन्छ ।
८ . नरैनापुरमा आफ्नै स्रोत र साधनबाट कोरोना विरुद्धको अभियान सफल पार्न सम्भव छ ?
हाम्रोमा केस कम छ । विगतको जस्तो अवस्था छैन । गाह्रो र अरुबाट मागेर चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छैन । अरुको ठाउँको तुलनामा नरैनापुरमा अहिले केस कम छ । नेपालगन्जको जस्तो अवस्था छैन । अहिलेसम्म हाम्रो स्रोत र साधनबाट चलाइरहेका छौँ । प्रदेश र संघको सहयोग माग्नु पर्ने अवस्थामा हामी छैनौ । हामीले सकभर नरैनापुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण धेरै नफैलियोस भनेर सचेतताका साथ काम गरिरहेको अवस्था छ । केस भएकोले व्यवस्थापनको लागि सहज पनि भइरहेको छ । यही अवस्थामा केस रहेभने हामीले सुरक्षित नै छौँ ।
९. अन्त्यमा, सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीलाई कोरोनाबाट सुरक्षित रहनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म सम्पूर्ण नरैनापुर बासीहरुलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि के भन्न चाहन्छु भने, अहिले कोरोनाको दोस्रो हुँदै तेस्रो लहर आइसकेको छ । अहिले सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ । तपाईँहरु निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुहोस । स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ । विशेष काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कम् । कोरोनाको शंकामा लागेमा जाँच गरौँ । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जाँचको सुविधा
लिनुहोस । अन्त्यमा मास्क लगायौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न नभुलौँ । अवसरका लागि मिसन टुडे दैनिकलाई धन्यावाद ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ ७, २०७८ 9:44:09 AM |
Prev‘सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं’
Next१४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै, इण्डाेनेसिया र भियतनामबाट एअर एम्बुलेन्स आउने